Tanteraka ao Aminy
"Ary hianareo dia tanteraka ao Aminy, sady Izy no Lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra" - Kol. 2:10.
Tsy afaka ny hiditra ny lanitra miaraka amin'ny toetra ratsy sy tsy tanteraka ianao, ary tsy maintsy mendrika ny lanitra amin'izao fiainam-pitsapana ankehitriny izao. Tsy maintsy miasa ao aminao ny Fanahin'Andriamanitra raha toa hiditra ny fonenan'ireo olo-marina ianao rehefa miverina i Kristy, mba hanananao fanandramana manokana sy ho tanteraka ao Aminy, izay misy ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Amin'ny alalan'ny herin'ny fahamarinan'i Kristy no tsy maintsy andaozantsika ny fahotana rehetra. Tsy maintsy misy ny firaisana velona eo amin'ny fanahy sy ny Mpanavotra. Ny fantsom-pifandraisana eo amin'ny olona sy Andriamanitra, dia tsy maintsy mivoha mandrakariva, mba hahafahan'ny fanahy mitombo amin'ny fahasoavana sy fahalalana an'Andriamanitra.
Maro anefa no tsy mivavaka. Mahatsapa izy ireo fa eo ambany fanamelohan'ny ota, ary mihevitra fa tsy tokony hanatona an'Andriamanitra raha tsy efa nanao izay fomba hahazoana sitraka Aminy, na koa mandra-pahatonga ny fotoana hanadinoan'Andriamanitra ny helony. Hoy izy ireo: "Tsy afaka ny hanangana tanana masina eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy fahatezerana na fisalasalana aho, noho izany tsy afaka manatona Azy aho". Koa mitoetra lavitra an'i Kristy izy ireo ary manota mandrakariva amin'izany, satria raha misaraka Aminy ianao dia tsy afaka manao afa-tsy ny ratsy ihany.
Vao manota ianao dia tokony hihazakazaka hankeo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, ka milaza izany rehetra izany amin'i Jesôsy. Tokony ho ory noho ny amin'ny ota ianao, satria noho ny ota natao, dia manao izay mampalemy ny toe-panahinao ianao, mampalahelo ny anjely, ary mandratra sy mandrotika ny fon'ny Mpanavotra anao feno fitiavana. Rehefa nangataka famelan-keloka tamin'i Jesôsy tamin'ny fanahy mangorakoraka ianao, dia minoa fa efa namela anao Izy. Aza misalasala ny amin'ny famindrampony, na manda ny fampiononany avy amin'ny fitiavany tsy misy fetra.
Raha toa ka tsy mankato anao ny zanakao, ary manao fahadisoana aminao, ka tokony hanatona anao amin'ny fo torotoro hangataka famelan-keloka, dia fantatrao tsara izay tokony hataonao. Fantatrao avy hatrany ny hambaboanao ny zanakao hiraiki-po aminao sy hanome antoka azy fa tsy miova ny fitiavanao azy, ary voavela ny helony. Moa ve ianao mpamindra fo mihoatra noho ny Rainao any an-danitra, izay tia loatra izao tontolo izao ka "nomeny ny Zanany Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay"? - Jao. 3:16. Tokony hanatona an'Andriamanitra tahaka ny zanaka manatona ny ray aman-dreniny ianao. — BE, 1 Feb. 1892.